Iyo nyowani vhezheni yeWine 3.14 yave kuwanikwa kurodha pasi nekuisa | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri vari kutarisira chirongwa cheWine vakaburitsa mazuva mashoma apfuura iyo vhezheni nyowani yeWine, ichisvika yayo nyowani vhezheni yewaini 3.14 nezvo zvinouya nemagadzirirwo akati wandei ebuggi uye nekugadziridzwa kushoma pane yayo yapfuura vhezheni.
Waini ("Waini Haisi Emulator" inodzokorodza chirevo) chirongwa chinokwanisa kumhanya neWindows inoenderana nera pane Linux, MacOS uye BSD.
Waini yakanaka kwazvo yemahara yakasununguka kune Windows API yeGNU / Linux masisitimu uye inogona zvakare kushandisa sarudzo Windows DLLs, kana iripo.
Uyewo, Waini inopa kit yekuvandudza pamwe neWindows chirongwa chinorodha, saka vagadziri vanogona nyore kugadzirisa akawanda maWindows zvirongwa inomhanya pasi peUnix x86, inosanganisira Linux, FreeBSD, Mac OS X, uye Solaris.
Munguva pfupi yapfuura, Waini yakaburitsa budiriro vhezheni 3.14, mune iyi vhezheni, mishoma yekuvandudza uye kugadzirisa bug kwakabatanidzwa.
De Iko kuvandudzwa kutsva kwakauya neiyi nyowani vhezheni kunogona kusimbiswa:
Wakawedzera rutsigiro rweDXTn decompression mameseji.
Kutsigira kunonoka kweMSI kuisa zvikamu.
YeJapan keyboard keyboard rutsigiro yakawedzerwa muDirectInput.
Kumwe kugadzirisa kune yakajairwa basa dialog.
Zvimwe zvishoma mifananidzo muShell32.
Uye pamusoro peese akasiyana mabug fixes.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni, unogona kushanyira chinotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Waini 3.14 paLinux?
Kana iwe uchida kuisa iyi nyowani vhezheni yebazi rekuvandudza wewaini pane yako system, iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho, maererano neako Linux kugovera.
Si vashandisi veUbuntu, Linux Mint uye zvigadzirwa, zvakafanira kuti vatevere anotevera rairo kukwanisa kuve neWini yekumisikidza uye nekumhanyisa pachirongwa pasina matambudziko.
Iyi nhanho ichaitwa chete neavo vanoshandisa 64-bit vhezheni yesystem, isu tichagonesa iyo 32-bit kuvaka muhurongwa.
Iye zvino isu tichawedzera zvinotevera kuhurongwa:
Isu tinowedzera iro repository:
Kana vari Vashandisi veDebian 9 vanowedzera:
Kana kana vashandisi veDebian 8:
Kana iri Arch Linux, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kunoenderana neArch Linux Tinogona kuisa iyi vhezheni nyowani kubva kune yayo yepamutemo yekuparadzira zvinyorwa.
Si yakavhurikaSUSE vashandisi vanogona kuisa Waini kubva kune yepamutemo yekuparadzira zvinyorwa, kunyange hazvo parizvino iyo yekuvandudza vhezheni isati yagadziriswa mukati mezvakachengetedzwa.
Isu tinongofanirwa kumirira kuti mapakeji avandudzwe, izvi zvichave mune nyaya yemazuva.
Iwo wekuraira wekuisa Waini ndeinotevera:
Kana kana iwe uchida, iwe unogona kutarisa munharaunda mapakeji uko iwe kwaunowana iyo Waini rpm, iwe unofanirwa kuenda kune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo itsva vhezheni yeWine 3.14 yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa
XAVIER TORRES akadaro
Mhoroi, ndoupi murairo wekumhanyisa chirongwa ".exe" neiyi nyowani vhezheni ye "waini", kare ndakazviita nekuisa kuraira "waini program_name.exe" asi ikozvino haichashandi, kunyangwe pakuisa kuraira " waini -version "» Anondiudza kuti iyo «waini» rairo haina kuwanikwa, ndatenda nekwaziso
Pindura XAVIER TORRES
YeLinux Mint iyi repo inopa matambudziko:
sudo apt-wedzera-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
kunyangwe iwe uchiedza kuwedzera neakanaka-wedzera kana neDhivhidha Maneja, zvinopa matambudziko ekuchengetedza.
Chero zano rekuti ungarigadzirisa sei?
mhoro parra akadaro
nekuti? gonesa makumi matatu nemaviri
Pindura ku hi parra
Izvo hazvishande muMint 19, pakati pezvimwe zvinhu meseji iyi inowanikwa.
"Chikwata che winehq-devel hachiwanikwi, asi zvimwe zvinongedzo zvehomwe
inowanikwa kune kumwe kunobva. '
Pindura kune hyacinth
paRaspberry Pi 3B + inoshanda here?
Ini ndinoshandisa mint uye haina kundishandira.
isiri kushandira Linux Mint 19 .... inokanganisa kukanganisa
Pindura kune ccantor
Ini ndaive ndaisa Linux Xubuntu mushure memakore ndisina kuisa chero Linux nechinangwa chekupa Linux mumwe mukana, ndakafamba, pakati pezvimwe zvinhu nekuti ini ndanga ndaverenga nezve Waini ... ndaifunga kuti kwaizove kubaya kaviri pachirongwa, pfuurira pfuura uye gamuchira. uye yaizoiswa lol ... Illusive of me. Kungoverenga izwi rekuti repository rave kutogadzira chimwe chinhu kwandiri, zvinoita senge inowedzera kwandiri.
Ndichadzoka apo Linux iri nyore kushandisa.
Kufambisa, imwe yevanonyanya kufarirwa maBitTorrent vatengi paLinux